[Wednesday, October 4th, 17] :: Madaxweynaha Soomaaliya oo u ambabaxay dalka Sudan
Muqdisho (RH) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta oo Arbaca ah ka ambabaxay magaalada Muqdisho iyagoo ku wajahan waddanka Sudan.
Wafdiga Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golaha wasiirada, xildhibaanno iyo saraakiil ka mid ah hey’adaha dowladda, waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Khadiijo Maxamed Diiriye iyo maareeyaha tiyaatarka Muqdisho Cabdi Dhuux Yuusuf Xersi.
Safarka madaxweynaha ayaa lagu sheegay caasumaad rasmi ah oo uu ka helay dhiggiisa dalka Sudan, Cumar Xasan Al-Shabaab, waxaana ay maqnaan doonnaan labo maalin.
Sarkaal u hadlay xukuumadda Khartoum ayaa sheegay kulanka labada madaxweyne in diiradda lagu saari doono xiriirka soo jireynka ah ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Suudaan, taageerada Suudaan ee Soomaaliya iyo sida lagu kordhin karo deeqaha waxbarasho ee la siiyo ardayda Soomaaliyeed.
Dalka Sudan ayaa ka mid ah waddamada taageera Soomaaliya, waxayna taageerada ugu badan gilisay xukuumada Khartoum deeqaha waxbarashada, iyadoo dalkaas ay wax ka bartaan kumannaan Soomaali ah oo dhigta Jaamacadaha dalkaas.
Madaxweyne Farmaajo ayaa horay u tagay dalalka Gobolka sida Itoobiya, Kenya, Uganda, Jabuuti, safarkiisa Sudan ayaa ah lugtii shanaad.
Toddobaadkii horre ayay aheyd markii Madaxweyne Farmaajo uu booqasho rasmi ah ku tagay boqortooyada Sacuudiga taasoo aheyd safarkii sedaxaad oo sannadkan ku tago.